किसानले धानको मूल्य पाएनन्, कृषिमा नगरको लगानी न्यून - Pradesh Dainik
किसानले धानको मूल्य पाएनन्, कृषिमा नगरको लगानी न्यून
यतिबेला किसानलाई धान, मकै लगाएतका बाली थन्क्याउन धमाधम छ । वर्षेधान उठाउनका लागि सबैजसो किसान खेतमा भेटिन्छन् तर सरकारले किसानको समस्यालाई सम्बोधन गर्ला भनेर आस गरेका किसान निरास हुन बाध्य छन् । सरकारले जति भाषणमा कृषिको कुरा गर्छ त्यो कार्यान्वयनमा भने कम्जोर देखिएको छ ।
नेपालमा धान उत्पादनको मुख्य क्षेत्र भनेकै झापा, मोरङ र सुनसरी हुन् । यस क्षेत्रमा प्रति विगाहा १ सय मन देखि १ सय २० मन सम्म धान उत्पादन हुने गरेको किसानहरु बताउछन् । मोरङको रंगेलीका किसानले धानको उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । पहिले जन लगाएर धानबाली उठाउने किसानले अहिले मेसिनको प्रयोग गरेर धान उठाइरहेका छन् तर नगरको लगानी न्यून हुनु, भनेको समयमा मल खाद नपाउनुले किसान ठुुलो मारमा परेको अगुवा कृषक सुरेन्द्र मण्डलले बताए । उनले भने “हाम्रो ठाउँमा ९० प्रतिशत् भन्दा वढी धान उत्पादन हुन्छ । अघिल्लो वर्ष २१ सय रुपैँया प्रति कुइटेल बेचेको धान यो वर्ष १४ सय रुपैँया छ । किसानको पिडा कस्ले बुझ्छ ? अहिले व्यपारी खमारमै आउँछन् तर धान उनेरको भाउमा दिनुपर्छ । सरकारले कृषिमा कुनै लगानी गरेको छैन् ।”
खेतको धान जसोतसो घरमा ल्यायो तै पनि भनेको समयमा व्यापारीले उठाइदिदैँन । २,४ दिन ढिलो भयो भने वर्षे धान खमारमै कुहिन थाल्छ । ४ विगाहामा धानबाली लगाएका अर्का कृषक केशव कुमार मण्डलको पिडा अलग्गै छ । अघिल्लो वर्ष मकैमा भाउ आउँछ भनेर मकै लगाएको तर धानको भाउ आयो, अहिले धान लगाएको तर मकैको भाउ आएको केशवको गुनासो छ । केशव भन्छन् “हेर्नुस् यो वर्ष ४ विगाहामा धान लगाएको छु । धान मेसिनले झारेर घरमा थुपारेको छु । व्यपारी आउदैन त के भन्छ २, ४ दिनमा लान्छु, मेरो त धान कुहिन थाल्छ तब व्यपारी के भन्छ की धान कुहियो भाउ कम्ती आउछ, अब हामी किसान मान्छे के गर्नु ? मलखाद पनि भनेको समयमा पाउँदैन, इन्डियाबाट ल्याउन पर्छ त्यही पनि एसएसवीले बोडरमै समात्छ, लगानी मात्रै उठ्छ हाम्रो मेहनत गरेको खेर गयो ।”
विवेक मण्डलले भने यो वर्ष धान भन्दा पनि मकै वढि लगाएका छन् । भनेको समयमा जन पाइदैन, मेसिन लगाउँदा सजिलो छ । देशको सबैभन्दा वढि क्षेत्र कृषि भएपनि यसको सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको विवेकले बताए । उनले भने “सरकारले दिनदिनै सुनको भाउ तोक्न सक्छ तर धानको भाउ तोक्न किन सक्दैन ? सरकारले हाम्रो धान खरिद गर्न परो अनि सरकारले नै त्यसको भाउ तोकेर बेच्न परो नि, यहाँ त हेर्नुस् दलालीले खरिद गर्छ हाम्रो धान पैसा पनि १०, २० हजार गरेर दिन्छ अनि पोसाउछ हामीलाई ?” फेरी अर्कोतर्फ भारतमा धान सस्तो मूल्यमा पाइने भएकाले व्यपारीहरुले भारतबाट धान खरिद गर्ने र नेपाल बेच्ने गरेकाले पनि किसानको धान नबिकेको गुनासो छ ।
कृषिमा नगरको लगानी न्यून
यसो त स्थानीय तहले नै बजेटको बाँडफाँड गर्ने भएकाले आवश्यकताका आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हो तर त्यो भएको पाइदैन । किसानका सारा गुनासा लिएर रंगेली नगरपालिका पुगेमा हामी नै जवाफ सुनेर निरास भयौँ । नगर प्रमुख दिलिप अग्रवाल (बगडिया) लाई कार्यकक्षमा नभेटेपछि यसको जवाफ उप–प्रमुख केशव कुमारी खरालसंग लिएका छौँ । कृषिमा नगरको लगानी वढि हुनुपर्ने हो तर विकास निर्माणमा वढि केन्द्रित भएको खरालको भनाइ थियो । खरालले भनिन “किसानको कुरामा म पनि सहमत छु, हामीले लगानी वढि मात्रामा कृषिमा गर्नु पर्ने हो तर किास निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ । कृषकको ठुलो समस्या छ, अब कसरी यसको समाधान गर्ने भनेर सोच विचार गरिरहेका छौँ । केही वडाहरुले बजेट छुट्याउनु भएको छ, हामीले पनि थोरबहुत केही चाँही छुट्याएका छौँ ।”
रंगेली नगरपालिकाले यस वर्ष कृषिका लागि कृषि चुन वितरणका लागि ४५ हजार र कृषक पाठशाला सञ्चालनका लागि २ लाख रुपैँया विनियोजन गरेको छ । नगर बाहेक केही वडाहरुले पनि कृषिमा थोरै रकम विनियोजन गरेका छन् ।
धानको भाउ कस्ले निर्धारण गर्छ ?
कृषकले उत्पादन गरेको धानको भाउ कृषकले तय गर्नुपर्ने हो तर यहाँ अचम्म त के छ भने तस्करहरुले धानको भाउ निर्धारण गरिदिन्छन् । किसान घरमा सस्तोमा उठाउने र महंगोमा बिक्रि गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । काँटावालाले भन्दा पनि धानको भाउ राइस मिलले निर्धारण गर्ने गरेको काँटावालहरु बताउछन् । सुनवर्षी ९ डायनियामा रहेको डि.के टे«डर्स एण्ड सप्लायर्सका संचालक धर्मेश कुमार सिंह बिचौलियाले धानको भाउ निर्धारण गर्ने गरेको बताउछन् । सिंहले भने “किसानको पक्षमा बोल्ने मान्छे कोही छैन् । अन्य देशमा किसान आन्दोलन हुन्छ । राज्यले लगानी गर्छ हाम्रो मा त सबै विचौलियाले विगार्छ अनि कस्ले सुन्छ किसानको कुरा ? किसान भन्छ व्यपारीले भाउ दिदैँन हेर्नुस् हामिले ब्रोकर नभए धान बेच्न सक्दैनौँ, सबकुरा ब्रोकरको हातमा हुन्छ । यहाँबाट धान लग्यो बिराटनगर पुग्दा भाउ घट्छ अनि हामी के गर्नु ? ६ बोरा धान बेच्दा १ बोरा युरिया आउँछ सरकार कहाँ छ ? हामीले देखेको तपाइ पहिलो पटक आउनुभयो नभए कसैलाई मतलबै छैन् किसान जे सुकै होस । तपाइ आफैँ भन्नुस धानको भाउ १४ सय छ भुसको भाउ १३ सय प्रति कुइटेल अनि किसान मर्दैन ?”
यो त उदाहरण मात्रै हो । देशैभरका किसानले उचित मूल्य नपाएर धान बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन् । धानको मूल्य तोकिएर मात्रै पनि त्यसको समस्या समाधान हुने देखिदैँन । स्थानीय तहले सक्दो लगानी गर्नुपर्छ । सरकारले नै धान उचित मूल्यमा खरिद गर्ने र त्यसको विक्रिको जिम्मा लिने हो भने किसानको लगानी र मेहनत उठ्न सक्छ । सरकारले किसानलाई हरेक सुविधाहरु उपलब्ध गराउन सक्नु पर्छ र उत्पादनको बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्रै कृषि प्रधान देशको नारा सार्थक हुन सक्छ ।